जापानमा कम्पनी खोज्दा ध्यान दिनैपर्ने १० कुरा | Nepali In Japan
जापानमा कम्पनी खोज्दा ध्यान दिनैपर्ने १० कुरा
जापानमा जागिर परिवर्तन गर्ने प्रकृया, परिवर्तनपछिका कानूनी प्रक्रिया, कम्पनीको छनौट आदि विषयमा यस अघिको लेखमा हामीले धेरै जानकारीहरु लेखिसकेकै छौं । आजको यस लेखमा भने हामी जापानमा सफलताका साथ काम गर्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले ध्यान दिनु पर्ने केही कुराहरुबारे बताउन गइरहेका छौं ।
जापानमा काम गर्दा तपाईले बढी ध्यान दिनु पर्ने १० ओटा प्रमुख पक्षहरु यहाँ दिइएको छः
यो बुँदा तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्छ । तर तपाईले गर्न चाहनु भएको र उनीहरुले तपाईबाट अपेक्षा गरेको चिज फरक हुन सक्छ । कम्पनीले तपाईबाट के कुराको अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरामा तपाईले बढी ध्यान दिनु पर्छ । रोजगारीका सिलसिलामा यस्ता कयौं कामसम्बन्धी विवरण हुनसक्छन् जसमा जुन शीर्षकको काम दिइएको त्यसको तुलनामा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाहरु भने नितान्त फरक हुन सक्छन् । अर्थात् गर्नु पर्ने कामको ‘टाइटल’ एउटा तर काम अर्कै ।
त्यसैले अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिसँग मैले के के काम गर्नु पर्छ भनेर सोध्नुहोस् । तिनीहरुले तपाईलाई तपाईको वास्तविक काम के हो भनेर बताएनन् वा बताउन चाहेनन् भने त्यहाँबाट निस्किहाल्नुहोस् । तपाईले सो जागिर स्वीकार गर्नु भयो भने तपाईले अरु नै काम गर्नु पर्नेछ ।
विदेशी भएकै कारणले जापानमा काम गर्नका लागि भिसाको भर चाहिन्छ । जापानका प्राय कम्पनीले तपाईको भिसा छैन भने पनि तपाईलाई काममा आबद्ध हुन सहयोग पु¥याउन सक्छन् मतलब तपाईको भिसाको जिम्मा कम्पनीले लिन्छन् । कम्पनीमा काम सुरु गर्नुअगावै नेपालबाट आफ्नो डिपेन्डेन्ट ल्याउनुपर्ने छ भने सो कुरा पनि सुरुवातमै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो प्रकृयाका लागि कागजात लगायतका कुरामा कम्पनीको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले सुरुमा नै जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ ।
धेरै जसो कम्पनीहरुमा एचआर विभाग हुन्छ । यसले तपाईलाई यस प्रक्रियामा मद्दत गर्नेछ । एचआर विभागले तपाईलाई मद्दत गर्न सकेन भने पनि उनीहरुले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्ने मानिस खोजिदिन सक्छन् । उनीहरुले यसो गर्न सक्छन् कि सक्दैन भनेर जागिर सुरु गर्नुभन्दा पहिलेनै सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भने तपाई काजगपत्र मिलाउने झन्झटमा फस्नु हुनेछ । यसले समयको ठूलो नोक्सान हुन्छ ।
हामी यस्तो संसारमा बसिरहेका छौं जहाँ धेरै भन्दा धेरै रोजगारी स्वचालित भइरहेको छ । जापानले हातबाट गर्न सकिने कयौं कामहरु यथावत् राख्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि तपाई जस्तो पायो त्यस्तै काममा टाँसिरहन अनि कुनै दिन प्रोगामले आफुलाई विस्थापित गरेको हेर्न पक्कै पनि चाहनु हुन्न ।
तपाईले कम्पनीमा कस्तो खालको भ्यालु ल्याउनु हुन्छ ? यसले भविष्यमा तपाईलाई कहाँ डोर्याउन सक्छ ? यसपछि तपाईले कस्तो खालको जागिर पाउनु हुन्छ ?
तपाईले पछि जापान छोड्न चाहनु भयो भने तपाईले सोही काम अन्यत्र गर्न सक्नु हुनछ कि हुँदैन ? जापानमा तपाईले काम गरेर लिनु भएको अनुभव नेपाल फर्केपछि वा अन्य देशमा पनि मूल्यवान छ कि छैन ?
तपाईले जापानमा काम गर्न शुरु गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले आफैंलाई सोध्नु पर्ने यी केही प्रश्नहरु हुन् ।
साथमै काम गर्न गइरहनु भएको मानिसहरुलाई भेट्न भन्नु होस् । उनीहरुले कसरी काम गर्छन् ? तपाईसँग कसरी व्यवहार गर्छन् हेर्नुहोस् । उनीहरुले मानेनन् भने यसबारे वार्ता गरेरै सहमति गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरुलाई बताउनुहोस् । उनीहरुले विदेशीहरुसँग कमा गर्ने गरेका थिए कि थिएनन् सुनिश्चित गर्नुहोस् । तपाईले तालमा ताल मिलाएर काम गर्न त सहकर्मीहरुको मद्दत त चाहिन्छ नै ।
सञ्चारको कुरा गर्दा तपाई उनीहरुसँग कुराकानी गर्न र उनीहरु पनि तपाईसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनु पर्छ । उनीहरुले प्रायः कुन भाषा प्रयोग गर्छन् ? जापानी ? कि अंग्रेजी ? तपाई सो भाषामा बोल्न सहज हुनु हुन्छ कि छैन ?
उनीहरुले जापानी भाषा मात्रै बोल्छन् भने तपाईको जापानी भाषा सिकाई तीव्र बनाउन भाषा कक्षा वा परिचय कक्षा उपलब्ध गराउन पनि सक्छन् कि ? कम्पनीमा करियर शुरु गर्न तपाईले शुरु गर्न मद्दत गर्न उनीहरुले के मद्दत गर्छन् ? तपाईलाई सूचना चाहियो भने तपाईले कुरा गर्न सक्ने अरु मानिसहरु छन् कि ? केही कम्पनीहरुले आफुलाई अन्तरराष्ट्रिय भन्ने देखाउन खोज्छन् । ती कम्पनीहरुमा चिनियाँ र कोरियाली सदस्यहरु पनि हुने भएकोले उनीहरुले प्रायः यस्तो भन्ने गरेका हुन् ।
कम्पनीमा काम सुरु गर्नुअघि माथि भनिएजस्तै संचारको भाषा के कस्तो हुन्छ निक्यौंल गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कम्पनीको आर्थिक पृष्ठभूमि
आफपुले काम गर्न गइरहेका कम्पनीको वित्तीय अवस्था सोध्नुहोस् वा स्टेटमेन्ट पनि माग्न सक्नुु हुनेछ । यसबाट तपाईले कम्पनी बलियो छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । त्यो नयाँ कम्पनी हो भने पनि रकम जुटाउन उनीहरुको के के योजना छ भन्ने सोध्नुहोस् । उनीहरुसँग कुनै योजना छैन र लगानीकर्ताहरु खोज्ने योजनामा छन् भने काम गर्ने कष्ट नगर्नुहोला । तलब सुविधा नै दिन नसक्ने कम्पनीमा काम गर्नुको के अर्थ ? अनि भिसा सपोर्टका लागि पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था बलियो चाहिन्छ ।
यहाँ प्याकेज भन्नुको अर्थ तपाइले काम गरेबापत कम्पनीले तपाईलाई उपलब्ध गराउने सबै भत्ता सुबिधा हो । कम्पनीले तपाईलाई दिन सक्ने सुविधाहरमा निम्नानुसार कुराहरु समावेश हुन सक्छन्ः
– काम गर्ने समय (घन्टा)
– बिरामी बिदा
यो प्याकेज तपाईलाई सुहाउँदो छ कि छैन निश्चित गर्नुहोस् । बिदाको मामिलामा भने तपाईलाई ठूलो झट्का लाग्न सक्छ । किनकि केही जापानी कम्पनीहरुले त राष्ट्रिय बिदा बाहेक वर्षमा १० दिनको छुट्टी मात्रै दिन्छन् । बिरामी बिदा पनि दिँदैनन् । वर्षमा कति दिन तलबी बिदा लिन पाइन्छ अनि बिरामी बिदा पाइन्छ कि पाइदैंन पहिला नै स्पष्ट गर्नुहोस् ।
जापानमा कम्पनीको संस्कृतिबारे सोचविचार गर्नु पनि साँच्चै महत्वपूर्ण चिज हो । तपाईले कस्तो खालको कम्पनीको लागि काम गर्न गइरहनु भएको छ ? कतै यो ‘खराब कम्पनी त होइन ? जापानमा कर्मचारीहरुको धेरै शोषण गर्ने, धेरै लामो समयसम्म काममा लगाउने कम्पनीलाई कालो कम्पनी भनिन्छ ? यस्ता कम्पनीहरुले तपाईलाई कामको बोझले थिच्नेछन् । त्यो कम्पनीका कर्मचारीहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् कि ? तपाईले दिनु भएको सुझावप्रति उनीहरुको रवैया कस्तो छ ? तपाईले त्यहाँ केही कुरा सुधार्न वा परिवर्तन गर्ने कोशिश गर्नु भयो भने उनीहरुले आफ्नो काम गर्ने शैली फेर्छन त ?
तपाई यस्ता कम्पनीमा अड्किनु भयो भने नियमित समय भन्दा बढी समय काममा लाग्नु पर्छ भन्ने तपाईले पहिला नै तयार हुनु होला । त्यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने तपाईले निर्णय गर्नु भयो भने भविष्यमा तपाई पक्कै पनि पछुताउनु हुनेछ । तपाईले पछुतो मान्नुभयो भने पनि तिनीहरुले तपाईलाई कामबाट निकाल्दैनन् । तपाईको जब टाइटल मात्रै फेरिदिनेछन् । तपाईलाई राजिनामा दिन दबाब दिने अरु काम पनि दिँदैनन् । त्यसैले यस्तो गल्ति गर्नबाट बच्नुहोस् । आफुले काम गर्न गइरहेको कम्पनीको समीक्षा ग्लासडोर लगायत वेबसाइटमा चेक गर्न नभुल्नुहोला ।
सो वेवसाइटमा कालो सूचिमा परेको कम्पनीको सूचि दिइएको छ । कामको खोजिमा भएको बेलामा यी कम्पनीमा काम गर्नबाट बच्च यस सूचिले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ ।
कार्यालय आउने जाने समय
तपाई आपूmले काम गर्ने ठाउँभन्दा निकै टाढा बस्नु हुन्छ भने तपाईले धेरै समय कार्यालय आउन र जानका लागि रेलमा बिताउनु हुन्छ । यसले तपाईमा व्यक्तिगत र पेशागत हिसाबले पनि नकारात्मक असर पार्दछ । टोकियोमा बसिरहेका मानिसहरुको लागि औंसत आवतजावतको लागि दैनिक करीब ३० वा ४५ मिनेट लाग्छ ।
यो त अति भयो भनेर तपाईले सोच्नु होला । तर टोकियो जस्ता ठूला शहरमा यो त सामान्य हो । तर, तपाई जति सक्नु हुन्छ त्यति यो रकम कम गर्न सक्नु हुन्छ । रेल सेवा निकै राम्रो छ भने पनि हरेक दिन लामो समयसम्म मानिसको भिडैभिड भएको रेलमा कोचिन कसैले पनि चाहँदैन ।
तपाई यहाँ बस्नकै लागि आउनु भएको हो त ?
तपाई जापानमा लामो समयसम्म बस्नकै लागि आउनु भएको हो । एक पटक आफ्नो मनलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस्ः के म यो कम्पनीमा लामो समयसम्म बस्छु ?
जापानी कम्पनीहरुले बारम्बार जागिर फेरिरहने मानिसलाई साँच्चै महत्व दिँदैनन् । त्यस्ता मानिसलाई त्यहाँ कुनै योगदान नै नदिइकन पैसाको खोजीमा कम्पनी कम्पनीमा चहारेर हिड्ने मौंरी जस्तै ठान्छन् । त्यस्ता मानिसको सराहना गर्दैनन् ।
जापानमा काम गर्न चाहनु हुन्छ भने म यही सल्लाह दिन्छु कि तपाई कुनैपनि कम्पनीमा कम्तिमा पनि २ वर्ष बस्नु हुन्छ भने मात्र रोजगारीमा संलग्न हुनु होला यसले तपाईको नेटवर्क बनाउने छ, त्यहाँ काम गरेको अनुभव मिल्नेछ अनि भविष्यको ढोका पनि खोल्नेछ ।
आजको लागि यत्ति नै । जापानमा कुनै कम्पनीमा जागिर खानु भन्दा पहिला माथि भनिएका बुँदाबारे सोच्नुहोला । कम्पनीमा छिरेर भिसा लिनु मात्र ठूलो कुरा नभई सोही काम वा कम्पनीमार्फत आफ्नो भविश्य कसरी उज्जवल पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुहोला ।
Posted in जानकारी, सल्लाह
Prevजापानी जीवनशैलीबाट सिक्न सकिने स्वास्थ्य र सौन्दर्य टिप्स
Nextयि हुन जापानमा पाइने चामलका ७ प्रकारहरु